Isikhunta seplastikhi sokubumba - iYuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
IJera line ngaphezulu kwe-16 yomjovo wepulasitiki. Ukubunjwa komjovo kukhiqiza ingxenye yepulasitiki yemikhiqizo yepulasitiki ye-JERA. Inqubo yomjovo wepulasitiki yinqubo yokukhiqiza yokukhiqiza izingxenye ngokujova izinto ezincibilikisiwe kwisikhunta. Bese ukukhiqiza ucacise izingxenye ezisele imikhiqizo yethu. Senza i-R & D futhi sithuthukise imikhiqizo ehlobene nokukhiqizwa yilo buchwepheshe.
Umjovo wokubumba weplastiki weJera fiber ikakhulukazi ukhiqiza izingxenye ezilandelayo zepulasitiki ze:
-FTTH ihange ngocingo, ugoqo ngocingo futhi ukumiswa izibopho
-drop wire ikhebula ngocingo
-Fiber optic amabhokisi nokuvalwa
Izixhumi zokubhoboza ugesi
-FTTH wire kubakaki
-Fiber optic ikhebula adapters
-LV abc izinkomishi zokuphela
Izibopho zekhebula lamandla kagesi aphansi
Izinto zokusetshenziswa ezisetshenziselwa umjovo wepulasitiki zingama-polymer afana neNayiloni, i-ABC, i-PC, i-PP, njll. Zonke lezi zinto zokusetshenziswa ziyahlolwa zibhekise ku-ISO 9001 ejwayelekile: 2015, nezidingo zethu zangaphakathi.
Ngokusebenzisa lobu buchwepheshe, iJera fiber inekhono lokucwaninga nokuklama imikhiqizo emisha nokwenza eminye imikhiqizo edingekayo yamakhasimende ngokuya ngamabanga ethu amanje. Kwenza iJera fiber ibe nohlu olubanzi lomkhiqizo ukwanelisa izidingo ezihlukile zamakhasimende. Futhi imikhiqizo yeJERA iba nokuncintisana kakhulu ezimakethe
Ngalezi zomjovo womjovo, singakhiqiza izingxenye zomjovo sisodwa. Yonga izindleko futhi yenza intengo yeyunithi yemikhiqizo ibe nokuncintisana, futhi singakwazi ukulawula ikhwalithi kalula ngokwethu.
Ukwenziwa ngcono kwansuku zonke kwezindawo zokukhiqiza nezixazululo zokwenza kahle kwenza iJERA ithuthuke usuku nosuku.